New Apple ahụhụ: "My iPad Pro abughi ebubo ma ọ bụ na agbanye" | Esi m mac
Egburu | | iPad, Noticias
Dị ka a ga - asị na ọ bụ ihe otiti nke ahịhịa, nsogbu anaghị akwụsị na Apple. Nke ikpeazu n'ime ha nwere ezigbo njikọ nke ikpeazụ nke nnukwu mmalite ya: ọtụtụ ndị ọrụ nke iPad Pro na-eme mkpesa na ngwaọrụ ahụ, ozugbo agbanyụrụ ya, enweghị ike ịkwụ ụgwọ ma ọ bụ gbanye. Gịnị bụ ihe ngwọta ya? Na-eso.
1 IPad Pro na nsogbu nsogbu ya
1.1 Ihe kpatara nsogbu ahụ
IPad Pro na nsogbu nsogbu ya
Apple "ọhụrụ" agbanweela n'ọtụtụ ụzọ, ụfọdụ dị mma, ụfọdụ adịghị mma. Ihe ọdịda ndị ahụ na-emekarị karịa ka achọrọ, na, karịa ihe niile, ọ bụ ihe nkịtị karịa ka ọ ga-adaba na ụlọ ọrụ dịka Apple nke ebumnuche ya zuo oke. Agbanyeghị, Apple taa gosipụtara ezinụlọ ezinụlọ na ọtụtụ ụdị ngwaọrụ karịa mgbe ọ bụla; mmelite nke sistemụ arụmọrụ ha na - eme na obere oge na ihe a niile, na njedebe, na - ebute njehie ndị siri ike ịkọwa. Ọ bụ ihe na-eme na iPad Pro, mbadamba ọhụrụ 12,9 nke anụ ọhịa ahụ na ọnụahịa mmalite ya, na-enweghị ngwa, bụ, ọ dịghị ihe ọzọ na ihe ọ bụla na-erughị, € 899, na-enwe njehie dị oke mkpa: mgbe batrị na-agwụ ma ọ bụ na agbanyụrụ ngwaọrụ ahụ, iPad Pro enweghị ike ịkwụ ụgwọ na buut. Nke a bụ ihe ọtụtụ ndị ọrụ na-akọ na netwọkụ mmekọrịta na ọgbakọ.
Na nsogbu a, doro anya, na iPad Pro nke a na-ejighi. Ma nke a dị oke njọ, dị oke njọ.
Companylọ ọrụ ugbua A matala ya ịdị adị nke ahụhụ a ma dịkwa ngwa iji nweta ezi ngwọta dị mfe:
Iji nwee ike iji iPad Pro ọzọ, gbanye ngwaọrụ ahụ. Iji mee nke a, pịa ma jide Home na Mkpọchi mkpọchi maka iri sekọnd ruo mgbe ị na-ahụ Apple logo.
Ihe kpatara nsogbu ahụ
Site na Cupertino naanị nkọwa ha nyere bụ na "Apple maara ihe a ma na-enyocha" n'agbanyeghị na ọ dị ka, n'ọfụma, ọdịda a na iPad Pro ga-azaghachi njehie software na nke ahụ bụ iOS 9.1 ọkọnọ ụfọdụ ụdị nke ekwekọghị na ibu mgbe ngwaọrụ agbanyụrụ n'ụzọ dị otú ahụ na mgbe e mesịrị ọ na-egbochi ezi Malitegharịa ekwentị. Ọ bụrụ na nchepụta a nke netwọkụ na-ekwupụta bụ eziokwu, ozi ọma ahụ bụ na mbata nke iOS 9.2N'ime izu ole na ole, nsogbu ahụ ga-abịa ná njedebe.
N'agbanyeghị nke ahụ, ajụjụ dị oke mkpa bụ ma ụlọ ọrụ dịka Apple ọ nwere ike ịga n'ihu na ụdị ọdịda a dị oke mkpa ma ọ bụ dị mkpa, ya bụ, ọ dịbeghị onye matara nnukwu njehie a? Ma kedu nke ka njọ, ọ bụ onye ọrụ ejirila ma ọ dịkarịa ala € 899 na, yikarịrị, ọzọ € 109 na Ntụle Apple na € 179 ọzọ na Smart keyboard, na-abanye n'ụdị "aghụghọ" iji gbanye ngwaọrụ gị?
Isi mmalite | Ihe otiti
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Ngwaahịa Apple » iPad » Apple Apple ọhụrụ: "My iPad Pro agaghị akwụ ụgwọ ma ọ bụ gbanye"
Emechara ya kpamkpam, enweghị m ụzọ m ga-esi maliteghachi ọrụ ya. M na-eme mkpọchi na ụlọ uko na logo batrị na-apụta ọzọ na-acha uhie uhie!
Enwere m ipad 3 ma m bido na-ebugharị ma ọ malitegharia oge niile ma batrị ahụ tọgbọ chakoo ... enwere ihe ngwa ngwa biko ... ebe ọ bụ ngwaọrụ dị oke ọnụ ...
You nwara chaja ọzọ karịa nke iPad n'onwe ya? Ọ bụrụ na ị jiri iPhone, ị ga-echere oge, ruo mgbe batrị pụtara na-akwụ ụgwọ, ọ bụrụ na nsogbu ahụ dị na chaja, ebe ọ nwere obere ike karịa ihe Apple na-enye anyị na iPad.
Site na Disemba 22 ruo 29 iTunes Jikọọ ga-emechi